Hey’adaha ammaanka ee Dalka oo ka war heylay qorshe Al-Shabab ay ku weerari lahayeen dekadaha – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 15 March 2016
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegta in la adkeeyay ammaanka Dekadaha muhiimka ah ee Dalka si looga fogaado in kooxaha Argagixisada ee xiriirka la leh Al-qaacidda oo is abaabulay ay weerar qorsheysan ka geystaan Dakadaha Soomaaliya.
Sarkaal sare oo ka tirsan Hay’adda Sirdoonka iyo Nabadsugidda Soomaaliya ee NISA ayaa Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed ee SONNA u sheegay in maleeshiyaadkii hubeysnaa ee lagu arkay shalayto Deegaanka Garacad ay qorsheynayeen weerar lagu qaado qaar kamid ah Dekadaha Soomaaliya markii xogtooda laga war helayna ay dib uga laabteen.
NISA ayaa sheegtay in la qaaday tallaabooyin amni oo dheeraad ah, kuwaas oo looga hortagayo qorshe kasta oo Kooxda UGUS ku dooneyso in ay ku carqaladeeyo ilaha dhaqaale ee Dalka.
Maleeshiyada ka tirsan Kooxda Al-Shabaab ayaa dib uga laabtay deegaankaasi kadib markii ay soo foodsaartay baqdin ay ka qabaan weerar kaga yimaada ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliya.
Tagged alshabaab, captured sea port
Magaalooyinka uu maro Webiga Shabeelle oo biyo la’aan baahsan ay ka jirto